Recipe Cherry Pie inhlama e multivarka
Iyini iresiphi ikhekhe ne cherry kusukela inhlama obaziyo? Uma ungazi kwanoma iyiphi indlela ukulungiselela izibiliboco ezifana ke uyilethe kulesi sihloko. Phakathi nalokho kubingelelana, sizosebenzisa hhayi kuphela kuhhavini kodwa multivarku.
Step by step iresiphi for the ikhekhe ne cherry kusukela shortcrust khekhe (bayobhaka photo enamathiselwe)
Izindlela ukwenza ikhekhe ne cherry kunabaningi kangaka. Othile ukwenza bhaka nemvubelo isizinda futhi umuntu uthola e Puff khekhe esitolo. Sanquma ukwenza shortbread umkhiqizo nge cream ne bhotela. Believe me, kusukela le dessert ngeke give up noma iyiphi izivakashi zakho.
Ngakho, isicelo edinga imikhiqizo cherry ikhekhe recipe inhlama yonke na? Ngenxa yalesi sidinga baking:
uwoyela asezingeni elifanele (alube) - mayelana 100 g;
naphakathi ushukela omhlophe - 150 g;
vanillin - dessert spoon;
Iqanda eluhlaza ezinkulu - 2 PC.
ufulawa sifted emhlophe - 350 g;
baking powder - isipuni egcwele;
amazambane isitashi - 2 nezinkezo elikhulu;
pitted cherry fresh noma eqandisiwe - mayelana 200;
ukhilimu awugqinsi, ithengwa esitolo - 200 ml (esetshenziselwa ukhilimu);
ushukela - mayelana 150 g (ukusebenzisa ukhilimu).
Mesim shortcrust khekhe
Cherry Pie inhlama e multivarka ukulungiselela ngokushesha okwanele. Kodwa ngaphambi ifomu yakhe ubhake, kufanele uxove ngokucophelela nsuku.
Kuze kube yimanje, i-bhotela encibilikisiwe, ugaye nge ushukela, bese wengeza ukuba amaqanda washaywa vanilla. Hlanganisa wonke izithako nge mixer, iyunifomu kanye mass sasivumela Fluffy. Khona-ke kwakukhona ngobunono Thela sifted ufulawa baking powder.
Xova nokunwebeka kodwa hhayi inhlama esintamo kakhulu, amboze ipuleti ke bese uthumela ku efrijini amaminithi awu 10.
Cherry Pie kusukela inhlama ukhilimu omuncu kuvela emangalisayo ithenda futhi esihlwabusayo. Ngokwengxenye, izakhiwo Dessert uzuza ngezithukuthuku ukugcwaliswa amnandi. Ukuze alungiselele, fresh ukhilimu omuncu ukusabalala endishini blender uphehle at yephuka kuze mass Fluffy.
Ukuze uthole olunye ithenda pie yokugcwalisa acidosis asetshenziswe kuphela emva ngokwengxenye imikhiqizo ukwelashwa ukushisa.
Owenza umkhiqizo ubhake e multivarka
By endleleni, hhayi kuphela ukusetshenziswa kuhhavini kusho ikhekhe recipe ne cherry kusukela inhlama. Ngo multivarka a confection kuvela hhayi ngaphansi esihlwabusayo. Indlela kungenziwa yokutholwa, uma udinga ngokushesha ukulungiselela dessert ibuthaka.
Ngemva ebambe elisekela esiqandisini kufanele kususwe kanye esetshenziswa inhloso yazo.
Ukuxubha izandla ngamafutha sunflower (ukuze inhlama is hhayi ababambelela), ukulungele babeka inhlama isitsha futhi ngobumnene Multivarki Mash yakhe ahleleka netolstym. Ngesikhathi esifanayo ukwakha usebe encane.
Top umkhiqizo ufafaze esincane isitashi amazambane. Lesi sinyathelo kuyadingeka ukuze ugxile ijusi ngokweqile cherry simisiwe. By the way, yalala ungqimba olandelayo. Ngo umkhiqizo ezifana semi osuphelile bhaka umpheki imodi for isigamu sehora. Njengoba isikhathi sihamba, thina usigcwalisa ukhilimu amnandi futhi uqhubeke ukufudumeza ukwelashwa cishe imizuzu engu-10. Ngemva kwalokho ikhekhe siphelile bavunyelwe kuphole ekamelweni lokushisa, athathe Multivarki bese efakwa imbala amahora amabili.
Khonza dessert etafuleni
Manje uyazi iresiphi ikhekhe ne cherry kusukela inhlama ukulungiswa elalisetshenziswa multivarka. Ngemva dessert izonakekelwa imbala, isuswe futhi uthathe yizicucu. amakhekhe Homemade etafuleni kanye itiye hot.
Yenza Cherry Pie shortcrust khekhe ne meringue
Uma ungenalo ezifana ekhishini Imishini njengoba multivarka ke ukupheka isihlabathi ophaya cherry ukuncoma kuhhavini ezivamile.
Ukwenza dessert esimnandi nge meringue, sidinga:
Iqanda eluhlaza ezinkulu - 4 PC.
ibhotela (kangcono ukuthatha "ezibiyele") - 1 iphakethe;
baking powder - isipuni;
ufulawa ukukhanya sifted - 2 izinkomishi;
ushukela akuyona omkhulu - ingilazi egcwele (i-meringue);
fresh noma eqandisiwe cherry - mayelana 300 g (zokugcwalisa).
Lokhu ikhekhe recipe ne cherry kusukela khekhe ukupheka kahle, uma uthanda dessert ezinoshukela futhi sweet kakhulu.
Amaqanda inkukhu zihlukaniswe abamhlophe izikhupha. Uphiko sokuqala ithunyelwa esiqandisini (cishe 20 imizuzu) bese yengezwa amanoni ukupheka yesibili elicibilikile, baking powder kanye ufulawa sifted.
Nomkhombe eyohlobo shortbread inhlama, it is ahlukaniswe izigaba ezimbili (1/3 futhi 2/3). I enkulu ithunyelwa isiqandisi, futhi ezincane - efrijini (imizuzu 20-25).
Nakuba shortbread inhlama epholisa, phehla amantshu amaqanda usebenzisa ngokunamandla mixer. Ngokwenza kanjalo, yengezwe ushukela. Okuphuma kuyinto Fluffy kakhulu futhi mass nemithi umbala ezimhlophe.
Ukuze ukwakheka pan isihlabathi ikhekhe noma ukutusa ukusetshenziswa isikhunta okuhlukene. Zahlakazeka zahlala ucezu enkulu inhlama chilled bese uxove ngezandla zakhe kuze umphetho hhayi obukhulu ngamapulangwe. Ngemva kwalokho, ngesisekelo ukusabalala simisiwe noma fresh cherry pitted, okuzokwenza ukuthi kusukela ngaleso sikhathi ukumboza nabamhlophe ngesiswebhu.
Ngokufeza konke lezi zinyathelo kwi ikhekhe wagcoba inhlama ukuthi selifakiwe efrijini. Okuphuma kuyinto enhle kakhulu umkhiqizo lulwimi siphelile.
Sand ikhekhe ne cherry futhi meringue Sisikisela ubhake ihora. Esikhathini lokushisa kuhhavini kufanele kube hhayi ngaphezulu kuka-degree angu-200.
Ngemva kokuqeda ukwelashwa ukushisa, ikhekhe kamnandi kakhulu futhi Gingerbread. Ngaphambi sikhonza it is selehlile ngqo ngesimo, bese ngobumnene zisuswe kusetshenziswa lokwela.
Yethula sandy dessert emakhaya
Njengoba ubona, inqubo ukupheka okusaswidi Uphaya meringue kanye cherry akuthathi isikhathi, imizamo kanye namandla. Ngemva dessert izothunyelwa ngoba ikhekhe kumele ilinde kudambe ngokuphelele. Kungenjalo, ungakwazi kalula ashise wena ku amajikijolo ashisayo futhi meringue.
ukusika ngokucophelela shortbread uswidi zibe izicucu, it is zisakazwa amapuleti ngokushesha ethulwa amalungu omndeni. Iphuzwe amnandi cherry pie ngokuzikhethela kanye itiye elimnyama.
Sand Cherry Pie uzilungiselele ngokushesha futhi kalula. Nokho, siphawula ukuthi, ngenxa okuqukethwe izithako ezifana bhotela noshukela, zingabantu kunalokho okunama-kilojoule amaningi. Ngakho-ke, abantu abafuna ukuba anciphise umzimba, udinga ukuba bangayeki lesi sidlo. Kulokhu, lo pie cherry kungcono ukupheka inhlama kuma-yogurt noma ubisi ngaphandle ukusetshenziswa ukupheka amafutha.
Ukupheka kungokwasekuqaleni futhi esihlwabusayo: khekhe cottage shizi nezinye izithako
Beaver inyama - umkhiqizo oluyigugu futhi izitsha ezihlwabusayo
Hodgepodge of sauerkraut
Salmon royally - iresiphi enkulu ngoba gourmets kweqiniso
Inyama Yorkshire Pudding: izitsha esilula gourmets kancane
Magnificent appetizer - eclairs caviar
Sula ngokuphepha i-USB flash drive: kungani uyayidinga, ukuthi ungayenza kanjani futhi ulungise izinkinga ezithile
Indlela yokuba i-blonde: ukukhanyisa izinwele zakho ngelamula
Spaceports zomhlaba (uhlu). I spaceport lokuqala
Indlela ukukala ingcindezi intracranial (ICP)
Inkolelo-ze 3 phakathi Blogger imfundamakhwela bagwetshelwe ukwehluleka
Isifo se-Celiac ezinganeni: izimbangela nemibonakaliso yemitholampilo
Ungasusa kanjani amadokhumenti wakamuva?
Indlela ukususa izinwele reddishnesses emva umbala? Indlela ukukhetha udayi izinwele
Yini ukubona e Kazan evakatjhweni wosuku olulodwa?
Barcelona Metro: isikimu ikhambo fast and ukhululekile
Student Visa e New Zealand